Fahad Yaasiin oo u hanjabay Xildhibaan su’aal kulul weydiiyay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Fahad Yaasiin oo u hanjabay Xildhibaan su’aal kulul weydiiyay
Ku-simaha Taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Dahir ayaa ka carooday su’aal uu weydiiyey xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka, isagoo ugu hanjabay inuu dacwad ku soo oogayo, sharcigana la tiigsanayo.
Xildhibaan Zakariye Gaashaan ayaa fadhigii su’aalo weydiinta ee maanta oo ay ku sugnaayeen xubo uu ka mid yahay ku-simaha Agaasimaha Hay’adda NISA, si toos ah u weydiiyey Fahad Yaasiin arrimo ku saabsan Hay’adda hoggaaanka NISA xiriir la leeyahay Alshabaab iyo sababtii xilka looga eryay taliye ku xigeenkii NISA Cabdalla Cabdalla oo sheegay in Alshabaab ku dhex milmeen hoggaanka NISA, taasoo keentay in jawaab culus uu bixiyo Fahad Yaasiin.
Waxaa uu ka dalbaday Guddoonka Baarlamaanka inuu raalligelin ka bixiyo isla waqtigaasi haddii kale uu qaadanayo xaqa qaanuuniga ah uu leeyahay oo ah inuu dacwad ku soo oogo, wuxuuna xildhibaannada u sheegay in sababta saxaafadda loo dalbaday in laga xiro kulanka ay ahayd in arrimahaas oo kale ay dhici karaan.
“Waxaa ii muuqata Hay’adda Nabadsugida in la xurmo dareeyay in golihii dhexdiisa in su’aal noocaan la isku dhex weydiiyo.., Aniga shaqsiyan aanan u qalmin taas… hadalkaas wuxuu gef ku yahay heya’adda Nabadsugida iyo shaqsiyan aniga, waxaa codsanayaa Xildhibaanka inuu cudurdaar ka bixiyo, haddii kale xaqa qaanuuniga aan leeyahay ayaa qaadanayaa” ayuu yiri Fahad Yaasiin.
Ku-simaha Agaasimaha NISA ayaa difaacay xilka eryidii Jen. Cabdalla Cabdalla oo uu sheegay inuu bixiyey sir qaran, ayna arrintiisa go’aan ka gaareen Guddi anshax, sidaasina xilka looga qaaday.
Xildhibaan Zakariye Gaashaan ayaa dhinaca kale diiday inuu raaligelin ka bixiyo su’aashii uu weydiiyey Agaasimaha NISA Fahad Yaasiin, wuxuuna sheegay in laga rabo inuu ka jawaabo su’aasha oo aanu ka guban xaqiiqadana caddeeyo.
Halkan hoose ka dhageyso codka Kusimaha Taliyaha NISA:-